Umgaqo ophindaphindiweyo kwi-cadastre uyathandabuza, isizathu asiloncedo kodwa nokuzinza kwedatha. Ukuba senze umthambo ogqithisileyo (kunye ne-capon rooster :)), kusenokwenzeka ukuba "zonke" iinkcukacha ziluncedo kwakamsinya okanye kamva, kodwa ngeenjongo ezibonakalayo, uninzi lwezi datha luxanduva kuzinzo, kwixesha eliphakathi ukubanjwa okanye ukuhlaziywa kwayo kuya kugwetywa. Xa umntu efuna ukwenza i-cadastre "multifunctional", Kufuneka uzibuze izinto ezinje:
Ngubani oza kubonisana nedatha?
Yiyiphi inqanaba lokuchaneka kulindeleke?
Ngubani oza kuhlaziya idatha?
Ziza kuhlaziywa ngaphi?
Kuyenzeka ukuba uqaphele ukuba ayizizo zonke iinkcukacha ezikwifayile ye-cadastral "eziyimfuneko" ngoko nangoko, kodwa ezinye zisetyenziswa ngokubanzi ukuba "abanye" (hayi i-cadastre) banokubonisana kodwa bangaze bahlaziye. Singazibiza ezi datha xa sisetyenziselwa izinto ngokubanzi. Kukwakhona nedatha i-cadastre engenakuyihlaziya, hayi kuba ingenako, kodwa ngenxa yokuba ingazinziswa okanye likho elinye iziko elinemeko ezingcono (okanye umdla), nangona ezi datha ziyimfuneko, kuba uhlaziyo lwabo aluxhomekekanga kwi-cadastre uthathelwa ingqalelo ukusetyenziswa kwesekondari okanye okhethekileyo. Ukuya kuthi ga apho idatha "engeyomfuneko" incitshisiweyo kwaye kulandelwe enye yemigaqo ethi inyuselo ye-INSPIRE ilandelwe, ethi ulwazi kufuneka lufakwe kube kanye kuphela ebaleni, ulawulo lwedatha luya kuba loluzinzileyo.
Ngendlela enomdla ukwahlula idatha isekelwe ubudlelwane bakhe kunye namaziko achaphazelekayo, kuquka iSebe Registry Land kaMasipala, i-National Registry yoMhlaba, i-Registry Land, Office of Planning, njl Ubukhulu becala oku utshintsha ngokunxulumene nemithetho yelizwe ngalinye, kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuba iirejista ilizwe "iinyaniso" yaye nantoni na 'kwenziwa "kungaba luxanduva omnye umzekelo, nayo zibakhethe idatha kwikhompyutha intsimi, kunye nezo ziya kuba yinkqubo kamva.
ULimmen ukwahlula ulwazi, ukusuka kumanani amathathu aphezulu eCadastre: Into, Isihloko kunye neNene. Ngeenjongo zemfundo esiye sabiza Impact and Transactions kumanani olwalamano, (ngokuqhelekileyo iqulunqwe ngedatha efunyenwe ngokuhlaziywa kwe-post-caption) ukwenzela ukuba umsebenzi ulula ukukhumbula:
Di-erecho (Ubuhlobo phakathi kwesihloko kunye nento)
Afectaciones (Ubudlelwane phakathi kwezinto kunye nekunene)
TUkusebenzisana (Ubudlelwane phakathi kwesihloko kunye nelungelo)
SIsifundo (Abantu ngabanye, bemvelo okanye abasemthethweni)
Into, oku kukumelwa kwenyani enokubhaliswa kwinqanaba leemephu okanye amaxwebhu. Apha zibonakala emva koko:
Ngesakhiwo, esenokuba kakuhle isakhiwana ezininzi isakhiwo sebali, isakhiwana sebali inkonzo ebhalisiweyo (condominium ekwabelwana) kodwa ngokubanzi has a iinkcukacha ezinxulumene geometry. Ukuchaneka ngumbuzo wokufaneleka kwe-cadastre kunye nombono wexesha elide.
Isakhiwo, esinokubandakanya ulwakhiwo, ufakelo olusisigxina, uphuculo kunye nee-asethi ezingezizo ze-geo Kwimeko yasemaphandleni, iya kuba luphuculo olusisigxina njengezityalo.
Kwakhona kweli nqanaba asethi inokuba akukho xwebhu imeko georeferenciado (ezifana affidavit) njengenqaku (ezifana nomhlaba okanye textoparcela ingongoma) kunye ungumcu (ezifana iimephu CAD ngaphandle ukudibanisa geodatabase).
Sujeto, oku kubonakaliswa ngabantu, kwaye banokuba ngabantu bendalo, kungekhona bendalo (njengobomthetho) kwaye banokuba namaqela.
Ekunene, Obu budlelwane phakathi kwabantu (izifundo) kunye neempahla (izinto). Ayisiyiyo kuphela into ebhaliswe ngokusemthethweni amalungelo angabandakanywa apha, kodwa nalawo enyanisweni, kodwa abonisa ubudlelwane bepropathi, ubunini okanye ilungelo lokudlulisa.
Nefuthe, Zizenzo ezichaphazela ngendlela enikeziweyo okanye ethintelayo ilungelo lokusebenzisa, idomeyini, indawo yokuhlala, ukusebenzisa okanye ukuhambisa into. Kujongeka njengokufana nomthetho, kodwa kukwandiswa koku ukuba iinkqubo zobhaliso ziphela zinika amagama amaninzi (njengenqaku elisecaleni) ngokungabikho kokhuphiswano lwabo, okanye ubuncinci ukuchaneka kwayo. Oku kunokuba sisalathiso esibhaliweyo, kodwa ngokubanzi baqala ngokudibana kwendawo echaphazela iyelenqe, nokuba kungoluntu okanye umthetho wabucala; umzekelo:
Umzila ophezulu wamandla, ovimbela ukusebenzisa okanye igumbi, kodwa kungekhona idibansi
Isitimela esingaphantsi komhlaba, esadlula ngaphantsi kwezakhiwo ezininzi, sisetyenziswe kwi-cadastre ye-3D, xa ipropati isendleleni kawonkewonke.
Inkqubo yokulawula ukuxothwa kwamanzi, avumela ukusebenzisa komhlaba phantsi kwenjongo yokucoca amanzi.
Indawo ephantsi kwesikhukhula, indawo ekhuselekile, ilungelo-kwendlela, njl.
Ngokuqhelekileyo iimpembelelo zitshintshe okanye ziyakushintsha umphumo walo ngokuhamba kwesikhathi; umzekelo:
Ipasile inokuba ngaphakathi kwimeko esemthethweni yokungena; Ngeenjongo zokubizwa kwesihloko, i-ejido ichaza ukuba ngubani okhupha isatifikethi sedomeyini, kodwa nje ukuba ibhalisiwe inokunyangwa ngasese nangona ikwimo ye-ejidal. Ayitshintshanga ummandla wefuthe kodwa isiphumo.
Kwakhona iimpembelelo aziphoqeleli ukwenza iinqununu zeofisi, ukuba ayimfuneko; umzekelo:
Iphakhethi inokuthi ithinteke ngokuthe ngqo kumda wezidolophini, ovumela ukusetyenziswa kwayo, kodwa ayifuni ukwahlula; ngaphandle kokuba umda weedolophini uthintela ngubani omele alayisenise ngaphakathi okanye ngaphandle.
Kwaye kunye neempembelelo "zinyani" ngelixa zingekho phantsi kwegunya elithile eligunyazisiweyo; umzekelo:
Ipasela eyinxalenye yendlela esecaleni kwendlela okanye kwindawo ekhuselekileyo. I-cadastre ithi "inje", kodwa kukudibana kwelinye iziko ukuthatha isigqibo ngentshukumo yokuziqhelanisa.
Intsebenzo, Zizenzo ezenziwa kwilungelo elifunyenwe. Oku kunokuba: umlinganiso, ulwakhiwo, ukuhlaziywa, ukugqithisela okanye ukuvavanya.
Intengiselwano kufuneka ifakwe kwaye ihlaziywe ngamacandelo ahambelana nomthetho. Ukubeka
U vavanyo Ayisiyonyani, kodwa kukuthengiselana kwipropathi, okwenziwa ngexesha elithile, ngendlela eya kuthi isebenze logama nje kungekho kuhlaziywa kovavanyo olo. Kodwa ukuvavanywa akuhambelani ne-cadastre (njengedatha ngokubanzi), kodwa kunoko intengiselwano ngeenjongo zorhwebo okanye zerhafu. Kuthetha ukuba yidatha, yokusetyenziswa kwetax okanye yezifundo zokufumana; Ukuhlaziywa kwalo kufuneka kube luxanduva lwelinye isebe, nokuba kungumthwalo kwi-cadastre.
Ukuvala ngokuyinxenye umxholo esiza kubuya ngawo kamva, sinokuchaza ukuba "idatha esetyenziselwa iinjongo ezininzi yokusetyenziswa ngokubanzi" kufuneka incitshiswe iye kubuncinane phantsi kolawulo lwe-cadastre, kwaye kufanele ukuba kufunwe ukwahlulahlula idatha "yokusetyenziswa kwezinto ezithile". Logama nje ubuncinci beemfuno ze iindlela ezisisiseko ye-cadastre: Izezimali, i-socioeconomic, ukusetyenziswa komthetho kunye nokusetyenziswa komhlaba.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukucoceka kwe-Topological
Post Next Uhlolo lweeastastralOkulandelayo »
2 Iphendula "Idatha kwi-cadastre"
Inqaku elinomdla, ngeli xesha lokuvula yonke into, lonke ulwazi kufuneka lubekhona kuwo wonke umntu kwaye luhlanganiswe kakuhle, ukuba ukhuphiswano lwedatha luyanyamalala, kusekho ixesha lokwenza njalo ...